Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo ka qeyb galay kulan lagu heshiisiinayay beelo wada dega Gobolka Mudug “Sawirro” | Markacadey.com
May 2, 2014	Editor	-
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo ka qeyb galay kulan lagu heshiisiinayay beelo wada dega Gobolka Mudug “Sawirro”
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa maanta ka qeyb galay kulan lagu heshiisiinayay labo beelood oo wada degta gobolka Mudug, kaasi oo lagu qabtay Muqdisho.
Kulanka ayaa waxaa kaloo ka qeyb galay odoyaal dhaqameed, waxgarad, siyaasiyiin iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana diiradda lagu saaray sidii heshiis buuxo ay u wada qaadan lahaayeen beelaha wada dega Gobolka Mudug, islamarkaana lagu dadaallo sidii looga wada shaqeyn lahaa nabadda gobolkaasi.
Nabadoon Maxamed Xasan Ciro iyo Nabadoon Saciid Faarax Jimcaale oo ku hadlayay magaca labada dhinac ee ay horey dirarta ugu dhex martay deegaanno ka tirsan gobolka Mudug, ayaa waxa ay sheegeen inay qaateen gogoshii Nabadda ee loo fidiyay, islamarkaana ay ku dadaallayaan sidii ay u xoojin lahaayeen heshiiskaasi lakala saxiixday.
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Baarlamaanka Mudane Mahad Cabdalla Cawad oo gabo gabadii kulankaasi dib u heshiisiinta ka hadlay ayaa sheegay in aad u muhiimsantahay in dadka ood wadaaga ah ay heshiiyaan, isagoo xusay in dowladdu Soomaaliya ay taageerayso wax kasta oo horseedi kara in nabadda lagu wada noolaado.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa gudaha Magaalada ka socday shirar looga hadlayay sidii lagu gaari lahaa heshiis lakala dhex dhigo labo beelood oo wada degmada Gobolka Mudug, iyadoo maantana la soo gabo gabeeyay kulamadii arrimahaasi looga hadlayay, islamarkaana heshiis lakala qaatay.